गोमुख गङ्गाको शिर वरूण नदी भएको भन्दै स्थानियले बिजुली उत्पादन गर्न दिएनन्, हेर्नुहोस् के छ यसको धार्मिक महत्व ? - samayapost.com
गोमुख गङ्गाको शिर वरूण नदी भएको भन्दै स्थानियले बिजुली उत्पादन गर्न दिएनन्, हेर्नुहोस् के छ यसको धार्मिक महत्व ?
समयपोष्ट २०७५ फागुन २१ गते ११:००
हिमाली जिल्लाको रूपमा चिनिने पूर्वी नेपालको सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको ऐतिहासिक धार्मिक महत्व बोकेको वरुण नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भएपछि यस नदीको अस्तित्व खतरामा पर्ने भएको छ ।
स्थानीयवासीले वरुण बचाउ सङ्घर्ष समितिसमेत गठन गरेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युत् उत्पादनको विरोधमा उत्रिएको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष छिरुक भोटेले जानकारी दिए । अध्यक्ष भोटेले ऐतिहासिक महत्वको मौलिक पहिचानको अस्तित्व खलल पार्ने किसिमबाट भएका गतिविधि कुनै हालतमा मान्य नहुने बताए । ऐतिहासिक मौलिक पहिचान बोकेको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र वरूण नदीबाट बिजुली उत्पादन गर्न नदिने भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन् ।